ဖမ်းဆီးခံရတာနှစ်လနီးပါး ရှိပြီး နောက်ဆက်တွဲ ဘာသတင်းမှ မသိရသေးတဲ့ သရုပ်ဆောင်ဆင်မ – Shwe Yaung Media
ဖမ်းဆီးခံရတာနှစ်လနီးပါး ရှိပြီး နောက်ဆက်တွဲ ဘာသတင်းမှ မသိရသေးတဲ့ သရုပ်ဆောင်ဆင်မ
ပရိသတ်ေ တွချစ်ခင်အားေ ပးရတဲ့ ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင်ဆင်မကတော့အနု ပညာနယ်ပယ်မှာ စွယ်စုံရ အနုပညာရှင် တစ်ယော က်ဖြစ်ပြီး အရည်အချ င်းပြည့် ဝတဲ့ဇာတ်ပို့ေ ကာင်းတစ်ေ ယာက်ပါ။ပရိသတ်ေ တွချစ်ခင်အားေ ပးရတဲ့ ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင်ဆင်မကတော့အနု ပညာနယ်ပယ်မှာ
စွယ်စုံရ အနုပညာရှင် တစ်ယော က်ဖြစ်ပြီး အရည်အချ င်းပြည့် ဝတဲ့ဇာတ်ပို့ေ ကာင်းတစ်ေ ယာက်ပါ။
သရုပ်ဆောင် ဆင်မကတော့လို င်းပေါ်မှာစ စ်အာဏာရှင်ကိုဆ န့်ကျင်တဲ့စာ သားတွေပြော.င်ေြ ပာင်မြောက်ေြ မာက်ရေးသား တဲ့သူတ စ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ဖ.မ်းဝရ. မ်းထု.တ်ခံရခြင်းမရှိေ ပမယ့်ပရိသတ်ေ တွချစ်ခင်အားေ ပးရတဲ့ ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင်ဆင်မကတော့အနု ပညာနယ်ပယ်မှာ စွယ်စုံရ အနုပညာရှင် တစ်ယော က်ဖြစ်ပြီး
အရည်အချ င်းပြည့် ဝတဲ့ဇာတ်ပို့ေ ကာင်းတစ်ေ ယာက်ပါ။
သရုပ်ဆောင် ဆင်မကတော့လို င်းပေါ်မှာစ စ်အာဏာရှင်ကိုဆ န့်ကျင်တဲ့စာ သားတွေပြော.င်ေြ ပာင်မြောက်ေြ မာက်ရေးသား တဲ့သူတ စ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ဖ.မ်းဝရ. မ်းထု.တ်ခံရခြင်းမရှိေ ပမယ့်နေအိမ်တွင်မတ ရား ဖ.မ်းဆီ.းခံခဲ့ရတ လည်းဖြစ်ပါ တယ်။ဒီနေ့နဲ့ဆိုသ ရုပ်ဆောင် ဆင်မဖ.မ်းဆီ.းခံရတဲ့2လနီးပါးရှိေ နပြီလည်းဖြ စ်ပါတယ်။
သရုပ်ေ ဆာင်ဆ င်မကိုရုံးထု.တ်စစ်ေ.ဆးခြ င်းမရှိဘဲထော.င်ထဲ မှာဘဲထားတာြ ဖစ်ပါတယ်။
ပရိသတ် ကြီးကလ ည်းသရု ပ်ဆောင်ဆင် မအမြန်ဆုံးလွတ်ေြ မာက်ဖို speak out လုပ်ပေးပါ ဦးနော်။မြန်မာပြည်ကြီးလည်းအမြန်ဆုံးငြိ မ်းချမ်းပြီးဖတ်ရှု့ပေးကြ တဲ့ မြန်မာပြည်သူ/သား များအားလုံးစစ်အာဏာ ရှင်လက်အော က်ကနေ အမြန်ဆုံးလွ. တ်မြောက်ကြပါစေ လို့ဆုတော င်းပေးလိုက် ရပါတယ်။
ဖမ္းဆီးခံရတာႏွစ္လနီးပါး ရွိၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲ ဘာသတင္းမွ မသိရေသးတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ဆင္မ
ပရိသတ္ေ တြခ်စ္ခင္အားေ ပးရတဲ့ ဇာတ္ပို႔သ႐ုပ္ေဆာင္ဆင္မကေတာ့အႏု ပညာနယ္ပယ္မွာ စြယ္စုံရ အႏုပညာရွင္ တစ္ေယာ က္ျဖစ္ၿပီး အရည္အခ် င္းျပည့္ ဝတဲ့ဇာတ္ပို႔ေ ကာင္းတစ္ေ ယာက္ပါ။ပရိသတ္ေ တြခ်စ္ခင္အားေ ပးရတဲ့ ဇာတ္ပို႔သ႐ုပ္ေဆာင္ဆင္မကေတာ့အႏု ပညာနယ္ပယ္မွာ
စြယ္စုံရ အႏုပညာရွင္ တစ္ေယာ က္ျဖစ္ၿပီး အရည္အခ် င္းျပည့္ ဝတဲ့ဇာတ္ပို႔ေ ကာင္းတစ္ေ ယာက္ပါ။
သ႐ုပ္ေဆာင္ ဆင္မကေတာ့လို င္းေပၚမွာစ စ္အာဏာရွင္ကိုဆ န႔္က်င္တဲ့စာ သားေတြေျပာ.င္ေျ ပာင္ေျမာက္ေျ မာက္ေရးသား တဲ့သူတ စ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး ဖ.မ္းဝရ. မ္းထု.တ္ခံရျခင္းမရွိေ ပမယ့္ပရိသတ္ေ တြခ်စ္ခင္အားေ ပးရတဲ့ ဇာတ္ပို႔သ႐ုပ္ေဆာင္ဆင္မကေတာ့အႏု ပညာနယ္ပယ္မွာ စြယ္စုံရ
အႏုပညာရွင္ တစ္ေယာ က္ျဖစ္ၿပီးအရည္အခ် င္းျပည့္ ဝတဲ့ဇာတ္ပို႔ေ ကာင္းတစ္ေ ယာက္ပါ။သ႐ုပ္ေဆာင္ ဆင္မကေတာ့လို င္းေပၚမွာစ စ္အာဏာရွင္ကိုဆ န႔္က်င္တဲ့စာ သားေတြေျပာ.င္ေျ ပာင္ေျမာက္ေျ မာက္ေရးသား တဲ့သူတ စ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး ဖ.မ္းဝရ. မ္းထု.တ္ခံရျခင္းမရွိေ ပမယ့္ေနအိမ္တြင္မတ ရား ဖ.မ္းဆီ.းခံခဲ့ရတ
လည္းျဖစ္ပါ တယ္။ဒီေန႔နဲ႔ဆိုသ ႐ုပ္ေဆာင္ ဆင္မဖ.မ္းဆီ.းခံရတဲ့2လနီးပါးရွိေ နၿပီလည္းျဖ စ္ပါတယ္။
သ႐ုပ္ေ ဆာင္ဆ င္မကို႐ုံးထု.တ္စစ္ေ.ဆးျခ င္းမရွိဘဲေထာ.င္ထဲ မွာဘဲထားတာျ ဖစ္ပါတယ္။ပရိသတ္ ႀကီးကလ ည္းသ႐ု ပ္ေဆာင္ဆင္ မအျမန္ဆုံးလြတ္ေျ မာက္ဖို speak out လုပ္ေပးပါ ဦးေနာ္။ျမန္မာျပည္ႀကီးလည္းအျမန္ဆုံးၿငိ မ္းခ်မ္းၿပီးဖတ္ရႈ႕ေပးၾက တဲ့ ျမန္မာျပည္သူ/သား မ်ားအားလုံးစစ္အာဏာ ရွင္လက္ေအာ က္ကေန အျမန္ဆုံးလြ.
တ္ေျမာက္ၾကပါေစ လို႔ဆုေတာ င္းေပးလိုက္ ရပါတယ္။
ကုလအထူးကိုယ်စားလှယ် ကျင့်ဝတ်ဖောက်ဖျက်ကာ တစ်ဖက်သတ်စွပ်စွဲနေဟု စစ်ကောင်စီမှတုံ့ပြန်
လောက်ကိုင်မြို့အဝင်တွင် မင်းသုံးပါး ရုပ်တု တည်ဆောက်